नयाँ परिपेक्षमा अस्वीकृत साहित्यको घोषणा | www.samakalinsahitya.com
नयाँ परिपेक्षमा अस्वीकृत साहित्यको घोषणा
- डा. कवितारम श्रेष्ठ
नेपाली समाजले भरखरै आएर एउटा जीर्ण अनुपयोगी व्यवस्थालाई विस्थापित गरी नयाँ सामाजिक व्यवस्थालाई स्थापना गर्ने महान कार्यमा पाइला चालेको अवस्था छ । जजसको यस संघर्षमा सहभागिता थियो त्यत्यस्ले यस नवीन समाजनिर्माणमा मौका पाउनुपर्छ । तर निर्माणमा मौका लिनु वा पाउनु भनेको त्यसको फल बाँडेर खाने अर्थमा लिनु हुन्न ।
मान्छेका सम्पूर्ण चेतना सीर्फ आफ्ना बाँच्नपर्ने स्वार्थमै केन्द्रित रहन्छ । त्यसैले स्वार्थी हुनु मान्छेको अबगुण पक्कै होइन । त्यो चेतनासम्मत स्वाभाविक मानववीय गुण हो । त्यही चेतनशील सुरक्षाको स्वाभाविक स्वार्थकै कारणले मान्छेहरु समूहमा एकत्रित भई सामाजिक प्राणी हुन पुग़्दछन् र अरु पशुहरुभन्दा माथि उठेर अनेकानेक भौतिक र साँस्कृतिक मूल्य र मान्यताहरुको निर्माण गर्दछन् । यसको प्रतिफलमा उनिहरुले भाग खोज्छन् भने त्यसलाई निकृष्टतम स्वार्थको दर्जा दिनु अमानवीय हुन्छ । त्यही अमानवियतालेनै सघर्षहरु निम्ताउने हो । होइन भने सहभोगकै आकर्षणले मान्छेहरुले निर्माणमा सहभागिता दिएको हुन्छ । यसरी चेतनाले स्वार्थलाई, स्वार्थले निर्माणलाई, निर्माणले, नयाँ सुसंस्कृत चेतनालाई विकास गर्दछ र फेरि त्यही प्रकृयाको पुनरावृत्तिले समाज अग्रतातिर निर्मित भइरहेको हुन्छ । समष्टीमा चेतना स्वार्थ र निर्माणकै अर्को नाम हो मान्छे । जति मान्छे चेतनशील छ त्यति ऊ सक्षम स्वार्थी बन्दछ । यो स्वाभाविक मानवीय गुणबाट हामीलाई तर्सनु छैन । बरु यस स्वाभाविक स्वार्थलाई पशुवत व्यक्तिबादिताबाट सामाजिकतातर्फ आकर्षित गर्नु नै मान्छेभित्रको सुसंस्कृत चेतनशीलताको पुरुषार्थ हुन्छ । यो चेतनासम्मत मान्छेत्व भित्रको स्वाभाविक नियम हो । मानव सभ्यता लाखौँ वर्षको संघर्षमा त्यतै प्रवृत छ र मानववंश रहेसम्म पनि हुने त्यही हो । र नयाँ नेपालको निर्माणमा हुने प्रवृित पनि कार्य र कारणको नियमले स्वभावतः हुने त्यही हो । तर त्यतिकै भइहाल्छ भनेर छाड्यौँ भने हामी ढुंगेयुगमा बाँचिरहेका हुने छौँ । यसमा चेतनाको उच्चतम बलात उपयोग हुनैपर्छ । मान्छेको स्वार्थलाई पेटभरीमात्र होइन घाँटीसम्मै आउनेगरी अबसरहरु प्रदान गरौँ । त्यस अघाएका स्वार्थले समाजलाई अग्रगतिको निर्माण नै प्रदान गर्ने छ । नत्र विज्ञान र प्रविधिले खुम्चँदो विश्वमा नेपाली जाति प्रतिश्पर्धाबाटै नामेट हुने स्थितिमा पुग्न बेर लाग्ने छैन । उदाहरण छ सही मानेमा 'बहादुर' कहलाइदा कहलाइदै त्यो बहादुरीको प्रतिकात्मकता आज 'भरौटे' वा 'हीनजाति' भन्नेमा परिणत भइसकेको छ । यो अबगतिबाट हामीले पाठ सिक्नैपर्छ ।
अब 'नयाँ नेपाल' को नारामात्र ले पक्कै पुग्दैन । 'नयाँ महान नेपाल'को नारासाथ पुनर्निर्माणको सुरुवात हुनुपर्छ । सामाजिक अभिमत नै नयाँ महान नेपालको पूर्वाधार हुने छ र बल हुने छ । एउटा व्यवस्था ढालिँदैमा हामीले सबै कुरा प्राप्त गरेका छैनौँ । एउटा अनुपयोगी थोत्रो घर ढालेका छौँ भने त्यसको जगको इंटाढुंगा बाँडचुडमा लाग्ने होइन अपितु नयाँ घरको निर्माणमा प्रवृत्त हुनुपर्छ । राष्ट्र निमार्णको जिम्मेवारी पक्कै ख्यालख्याल छैन त्यो यस अवस्थामा कि समस्त पूर्ववत स्थापनाहरुलाई पूरै अस्वीकार गरिएको छ । अनि युगौँयुगसम्म सदा प्रतिपक्षमा रही संघर्षरत रहँदा हामीमा निर्माणको लागि चाहिने सीप र अनुभव छैन । अब प्रतिपक्षीय बन्दूक, ढुंगा, मुढा र हडताल गरेर यो राष्ट्र संचालित हुनेवाला छैन । अझ यसको निर्माण नै नभएको अवस्थामा संचालनको कुरा कता हो कता परै छ । यसै अवस्थामा अनेकानेक स्वार्थहरुले दाउ मार्न खोजिरहेका हुन्छन् । विस्थापित शक्तिहरुले भड्काउने, वीष हाल्ने, प्रत्याक्रमण गर्ने, अनेकन हुन सक्छ । अझ सबैलाई बोलीहाल्दा अपच लाग्ने कुरा यो पनि हुन सक्छ कि अगाडि आएका यस्ता अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्दागर्दै सत्ता पनि दमनकारी हुन पुग्छ । सत्ताको अर्को नाम नै दमनसंयन्त्र हो । यसले जनमूखी धाराबाट विचलन हुनेवित्तिकै गलत जरा हाल्न लाग्छ र आफूसम्मत नहुने मूल्यहरुको मर्दन सुरु गर्छ । नियन्त्रण खाराब होइन तर यसले जनमूखीहद नाघ्न लागेपछि निरंकुश हुन लाग्दछ । यी सबै अवस्थाहरुमा जागरुक नागरिकहरुले खबरदारी गर्नपर्छ ।
बुद्धीको खेति गर्ने देशका साहित्यकार पत्रकार कलाकार आदिको जिम्मेवारीको सन्दर्भमा भन्दछु पुनरुत्थानका प्रयत्नहरुलाई नाश गर्ने र सकारात्मक निर्माणहरुमा सहयोग पुर्याउने काममा सगाउँदै सत्ताको कृयाकलापलाई खबरदारी गर्ने सशक्त निर्माणमूखी प्रतिपक्षको भूमिकामा तत्कालै आन्दोलित हुनुर्पछ ।
०२६ सालमा आन्दोलित भएको 'अस्वीकृत जमात'को 'अस्वीकृत साहित्यिक अभियान' यस्तै अभिष्टमा आन्दोलित थियो । राजनीतिक दलहरु जब निरंकूशता विरुद्ध प्रयोग गर्नपर्ने आफ्ना शक्तिलाई आफाआफैमा भिड्न खेर फाल्दैथे त्यसबेला विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने विद्रोही क्रान्तिकारी साहित्यकारहरुले 'अस्वीकृत जमात'को 'अस्वीकृति'को संखघोष गर्दै संयुक्तमोर्चा कसी बौद्धिक संघर्ष शुरु गरेथे । त्यसबेला ती साहित्यकारहरुलाई अराष्ट्रियतत्व मानिनुको अपगालसाथ निरंकूश सत्ताको दमन त झेल्न पर्यो नै सँगै आफ्नै राजनीतिक दलनजिकका पत्रपत्रिकाहरुले पनि अन्यशक्तिसंग हातेमालो गरेको अभियोग लाएर अराजक, असामाजिक, तत्व, ज्यानमारा, हिप्पी, भुस्याहा कुकुर, आदि अपशब्दले गाली गर्दै यीनलाई देशनिकाला र फाँसीको सजाय दिनपर्छ भनेर दमनकारी सत्तालाई भडकाउने कामसम्म गरे । (हेर्नु मेरा अस्वीकृत मान्यताहरु, अभिव्यक्ति प्रकाशन) । त्यो 'अस्वीकृत लेखन'को विरासत विद्रोही सर्जकहरुमा बढ्दै गयो र त्यसैको उदाहरण झांगिएर राजनीतिक दलहरुको घैँटोमा २० वर्षपछि ०४६ सालमा पुगेरमात्र घामलाग्न पुग्यो । फलस्वरुप देब्रे दाहिने सबै कित्ताका दलहरुले संयुक्तमोर्चा कसी संघर्षलाई एक हदमा सफल गराएरै छाडॆ । त्यही संयुक्त मोर्चाको पुनरावृत्तिले अखिरमा नेपाललाई आज सामन्तबादी जंन्जालबाट पूरा मुक्त गरेको छ । 'अस्वीकृत जमात'को त्यो संघर्षमय इतिहास किताबको पन्नामा साहित्यिक आन्दोलनको रुपमा मात्र थन्किदै आएको छ र अब हुने पनि त्यही हो । 'अस्वीकृतहरु'को नियति नै त्यही हो । कतै भगबण्डा वा लुच्छाचुडीमा उ सलग्न हुन्न । अपितु ऊ अग्रपरिष्कारको लडाईँमा प्रवृत्त भइहाल्छ ।
यहाँसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरुको लँडाइ सकिएको छ । अब उनीहरु आफूलाई स्थापना गर्नमै व्यस्त छन् र हुन पर्ने स्वाभाविक नियम पनि त्यही हो । समाजलाई गति दिन उनीहरु व्यवस्थित हुनै पर्छ र सबैले एकसाथ झ्याउँझ्याउँ गरेर देश निर्माण हुँदैन । एक दलले स्थान पाउनै पर्छ र त्यसको लागि भाले जुधाइ हुन्छ नै । त्यो राजनीति हो । यसलाई अन्यथा लिनैपर्दैन र त्यो तालमा हतोत्साहित हुनै पर्दैन ।
कुरा हो साहित्यनीतिको । यसको कुरा अर्कै हुन्छ । यात समयसापेक्षताको नारामा त्यो सत्ताको भाटगीरी गर्छ र सत्ताको आँखामा नबिजाउने 'स्वीकृत जमात' बन्दछ या आफूसापेक्ष समयलाई डोर्याउछु भनेर समयको खबरदारी गर्छ र सत्ताको आँखामा बिझाउने 'अस्वीकृत जमात' बन्दछ । त्यॊ पहिलोखाले जमातको संघर्ष सिद्धिसकेको हुन्छ र त्यो स्तुतिगान गर्दै जीविकोपार्जनमै काल पर्खेर मर्दछ । तर अर्को खाले जमात हरेक क्रान्तिको सफलता पछि फेरि समारात्क परिष्कारको लागि प्रतिपक्षको भूमिकामा तत्काल प्रवृत्त हुन्छ । यो मरेर पनि संघर्षहरुमा जीवित रहिरहन्छ ।
'अस्वीकृत जमात' भन्ने शव्द प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहने शाश्वोत जमातको लागि एउटा नाम मात्र हो । नामसँग के छ ? एउटा विचार हो यो र अस्वीकृतिकै वरिपरी यो वैचारिक भएकोले यसको बिचारलाई 'अस्वीकृत विचार' भनियो अनि यो विचार बोक्ने जमातलाई 'अस्वीकृत जमात' । सामान्यमै बुझौँ - हामी जब बोल्छौँ हाम्रा मुखमा ताला लाग्न सुरु हुनेछ त्यसकारण हामी 'अस्वीकृत जमात' । हामी मुखमा ताला लगाउने संस्कृतिलाई नै उल्टै अस्वीकार गर्छौ त्यसकारणले पनि हामी 'अस्वीकृत जमात' । सबै सकारात्मक परिवर्तनको लागि सत्तासुख र सबैसबै प्रलोभनहरुलाई अस्वीकार गर्दै थप निमार्णको लागि अग्रगामी हुन्छौँ त्यसैले हामी 'अस्वीकृत जमात' ।
स्वाभाविक विज्ञानसम्मत जनमूखी परिष्कारको लागि हुने सबैखाले संघर्षलाई जायज मान्ने मान्यता त्यस जमातको मान्यता हो- 'अस्वीकृत मान्यता' । हाम्रा चिन्तनशील प्रहार सामाजिक आर्थिक साँस्कृतिक समाजका हरपक्षमा अस्वीकारयुक्त सकारात्मक हावी हुनेछ । राष्ट्र निर्माणको सन्दर्भमा दलगत स्वार्थलाई त्याग्दै सामाजिक स्वार्थमा निर्माण कार्यको सहयात्री बन्दछौँ हाम्रो त्यो कार्यनीति हो ।
जुन दिन जुनक्षण हामीमा भड्काउ आयो हामी 'स्वीकृत जमात' । कहीँ कसैले 'स्वीकृत' वा 'अस्वीकृत जमात'मा सदस्यता लिइराख्नु जुरुरी छैन । नाम लेखाइ राख्नु जरुरी छैन । उ उसकै सृर्जनाहरुमा स्वीकृत वा अस्वीकृत कसरी बाँच्ने हो अघोषित बाँचिरहेको हुन्छ । तर सत्य यो हो सबै अघोषित अस्वीकृतहरु खरानीभित्रका भुंग्रो हुन्छन् । मेरो यो घोषणालाई कतै दर्ता गराएको छुइन । त्यसैले यसलाई पनि 'अघोषित घोषणा' नै मानेहुन्छ । यो घोषणा पक्कै हो र बढीमा अस्वीकृतहरुको तर्फबाट ०२६ सालपछिको हाजिरी हो । यसै सन्दर्भमा ०४८ सालमा छापिएको मेरो उपन्यास 'बकपत्र'को अन्तिम घोषणा जसलाई मैले निर्माण गरेको चलचित्र 'मुक्तिसंघर्ष'मा समेत घोषणाको रुपमा प्रयोग गरेको छु त्यो यहाँ पनि घोषणाकै रुपमा दोहोर्याउन चाहन्छु ।
'अब म मुक्त छु सम्पूर्ण आशक्ति र अनाशक्तिहरुबाट । अब मैले आफूलाई हराउनु छैन । हराएर फेरि बाँच्ने लोभमा त्यो शासित त्यो शोषित बाँच्दिनँ । आफ्नो अस्तित्व खोज्दै कमजोरमाथि भाले बास्दिनँ । संस्कार-त्यो एउटा पीडाबाट कँजिइन्न । स्वीकृति- त्यो रन्डी मरण मर्दिनँ । पलायन- त्यो बाउन्नी कुण्ठा वाँच्दिनँ । आत्महत्या नै सही समस्त पीडाहरु विरुद्ध म सुसङ्गठित कीरा लाग्ने छु । विषालु नङ्ग्राहरु झम्टने छु । आफ्नो अस्तित्व म आफैँसँग खोज्छु । अरुसँग माग्दिनँ । म अब प्रस्तुत छु आफ्ना स्वाभाविक मूल्यहरुका जगमा निरङ्कुश त्यो मूल्य त्यो पीडा विरुद्ध । खवरदार ! मैले आफ्नो अभियान सुरु गसिकेँ । मेरो कथा अब सुरु हुन्छ ।'
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : शनिवार,4श्रावण, 2065